सम्पूर्ण सुख सुविधा सहितको आफ्नै एउटा चट्ट परेको घर होस् भन्ने इच्छा कसले राख्दैन होला र? तर त्यस्तो सपनाको घरको निर्माण गर्दा देखि महिनै पिच्छे जस्तो त्यसको मर्मत संहार गर्नु पर्दा खेप्नु पर्ने पिडाको बारेमा त घरबेटीहरूलाई मात्रै थाह होला।
सोचौँ त छड, गिट्टी, बालुवा, ईट्टा, पाइप, टाईल, मार्बल, रङ्ग र यी सामाग्री प्रयोग गरी चट्ट परेको घर बनाइदिने सिपालु मान्छे जुटाउन कति झन्झट होला? त्यस्तै घर बनिसकेपछि त्यस भित्र इन्टेरियर डिजाइन गरी सुहाउँदो कार्पेट, पर्दा, दराज, पलङ, किचन क्याबिनेट, डाईनिङ्ग, अन्य फर्निचरहरू र त्यस माथि आकर्षक सजावटका सामाग्रीहरू मिलाएर राख्न आफ्नो बुद्धिले कतिसम्म भ्याउला? त्यसपछि टि.भी, फ्रिज,माइकोवेभ, भ्याकुम क्लिनिङ्ग, हिटर, एसी, मोटर, सोलार,इन्टरनेट, डीस, वासिङ्ग मेशिन, डीस वासर लगायतका सामानहरू पनि त राख्नै पर्‍यो। त्यस पछि घरसँगै यिनै सामानहरू पनि त बूढो हुँदै जान्छन्, अनि सामानहरू भत्किने र बिग्रिने समस्या नबोलाए पनि बेलाबखतमा आइराख्ने गर्छन्। घरको रङ्ग खुइलियो, रङ्ग लगाउने मान्छे गुहार्नुपर्छ। त्यस्तै बिजुली बिग्रिए इलेक्ट्रिसियन र पाइप बिग्रिए प्लम्बर। यस्ता समस्याहरूले बेलाबखतमा सबैलाई सम्झी नै रहन्छन्। तर भनेको बेलामा भनेको जस्तो इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, पेन्टर, मेसन कहाँ पाइन्छ र? अनि पर्छ फसाद।
एक पटक कल्पना गरौँ त यी सबै समस्याहरूको समाधान पनि एकै ठाउँबाट भइदिए कति गज्जब हुन्थियो? हो, घरको निर्माणदेखि घरमा चाहिने सामाग्रीहरू र तिनीहरूको मर्मतसम्हारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्याहरूको एउटै हल लिएर आएको छ होम सुविधा प्रा.लि.ले।
होम सुविधा प्रा. लि. का सञ्चालक हुन् जनकपुरका पवन मण्डल । पढाइमा अब्बल पवनले सानैदेखि ठूलाठूला सपनाहरूलाई साथी बनाएका थिए। आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने रहर उनलाई सानैबाट थियो। यही केही गर्छु भन्ने जोस र जाँगर लिएर उनी एस.एल.सी दिएपछि काठमाडौँ आए। उनी काठमाडौँमा आफ्ना दाइहरूसँग बसे। विज्ञान विषय लिएर १२ कक्षाको पढाइ सके। विभिन्न NGO, INGO तिर जागिर पनि गरे। इन्सुरेन्स कम्पनीमा शाखा प्रबन्धकका रूपमा पनि काम गरे, धेरै अनुभव बटुले। तर उनलाई वर्तमान कामबाट सन्तुष्टि भने मिलेन। केही नयाँ र फरक गरौँ भन्ने लागिरहन्थ्यो।
त्यही अनुभूतिले उनलाई आफ्नै छुट्टै व्यवसाय सुरुवात गर्ने विचार तर्फ डोहोर्याउन सुरु गर्‍यो । त्यसैकारण उनले त्रिचन्द्र कलेजको विज्ञानको पढाइलाई चटक्कै छोडी व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन गर्ने निधो गरे र काठमाडौँको टेक्सस कलेजबाट व्यवस्थापन सङ्कायमा बिबिएसम्मको अध्ययन पूरा गरे। उनका केही साथीहरूले पनि एक दिन आफ्नै केही व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेका थिए। त्यसैले फुर्सद हुँदा उनीहरू ‘मिलेर के व्यवसाय गर्न सकिएला?’ भनी छलफल गरी रहन्थे। छलफल, हरेक हप्ता चल्थ्यो। तर कुरा धेरै काम भने शून्य। पवनलाई यही गफमा नै सधैँ रनभुल्ल भएर बस्नु थिएन। आफ्नो उदेश्यसम्म पुग्न उनलाई खुट्किलाहरु बनाउँदै जानु थियो।
पवन कलेजमा पनि निकै राम्रा विद्यार्थी थिए। पढाएका कुराहरू ध्यान दिएर सुन्थे, बुझ्न खोज्थे र जीवनमा उतार्न खोज्थे। कलेजमा पढाइएका विभिन्न कुराहरू मध्ये उनलाई एउटा विषयले छोएको थियो र त्यो थियो पी.एस.पी (PSP) अर्थात् प्रब्लम सल्भीङ्ग प्रोडक्ट। उनलाई यस्तो व्यवसाय गर्नु थियो जसले धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूको ठुलो भन्दा ठुलो समस्याहरू सजिलो तरिकाले समाधान गरिदिइयोस्।
यही सोच लिएर उनले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका मुख्य समस्याहरू खोतल्न थाले। समस्याहरू धेरै भए तापनि पवनको रुचिको क्षेत्र भेटिएन। खोज्दा र बुझ्दा १ वर्ष नै बित्यो। यो अवधिमा उनले घरघर चहारे, सबैको समस्याहरू बुझे। घर आए, सोचे, अनुसन्धान गरे र धेरै घोत्लिए। घरमा इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बरको अभाव सबै ठाउँमा देखियो। भनेको बेला नपाइने, बोलाउँदा नआउने र आएपनि उनीहरूले भने अनुसारको पैसा दिनुपर्ने। यो समस्या धेरैलाई परिरहेको पवनले देखे। भाडामा बस्दा आफै पनि कति पटक यस समस्याको सिकार बने। समस्याका बारेमा छानबिन गरेर उनले यस समस्यालाई नै हल गर्ने व्यवसाय सुरु गर्ने सोच बनाए। तर सोचलाई यथार्थमा परिणत गर्न सजिलो त कहाँ हुन्थ्यो र?
सुरुमा त हातमा लगानीको लागि पर्याप्त पैसा पनि थिएन। उनले साथीहरूसँग सहयोग मागेर, ऋण लिएर र आफूले बचत गरेको रकम मिलाएर ५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरे। उनको सोचलाई संस्थागत रूप दिनका लागि एउटा ठाउँको आवश्यकता थियो। ठाउँ धुमधुमती खोजे पवनले। चाबहिलमा फ्ल्याट खाली भनेर लेखिएको कागजमा पवनका आँखा गए। सोधपुछ गरे। अफिस राख्नका लागि ३ कोठाको फ्ल्याट उनलाई पर्याप्त लाग्यो। उनले फ्ल्याट भाडामा लिइहाले।
५ लाख रुपैयाँको लगानी र २ जना कर्मचारीबाट कम्पनी सुरु भयो। सुरु अवस्थामा होम सुविधा भनेर उनीहरूलाई कसैले चिन्दैन थियो। खासै काम नै हुँदैन थियो उनीहरूसँग। बिस्तारै पवनले फेसबुक मार्फत व्यवसायको मार्केटिङ गर्दै गए। व्यवसायको पर्चाहरू बनाएर घरघर पसलपसलमा बाँढे। यसको सकारात्मक असर छिटै देख्नमा आयो। त्यसपछि होम सुविधाले मान्छे खोज्नु परेन। मान्छेहरू होम सुविधा खोज्दै आफै आउन थाले। इलेक्ट्रिसियन चाहियो भनी पर्चाहरू बनाए, प्लम्बर चाहियो भनी पर्चाहरू बनाए, इन्टरनेटमा प्लम्बरहरु खोजे, सम्पर्क गरे र बोलाए।
सुरुमा कसैले तलबको हिसाबमा काम गर्न मानेनन्। कतिले तलब थोरै भयो भने। पवनलाई कर्मचारी राख्न निकै गाह्रो भयो। त्यसपछि उनले तलब बढाएर कर्मचारीहरू राख्नुपर्ने भयो। उनीहरूले दिएको सेवा मन पराउँदै गइयो। त्यसपछि बिस्तारै ग्राहकहरू थपिँदै गए।
अहिले होम सुविधामा पवन सहित सन्तोष तिम्सिना, राजकुमार ठकुरी, गोपाल तिम्सिना र उमा खत्री गरि ५ जनाको व्यवस्थापकीय टिम छ। त्यस्तै २२ जना जति कर्मचारी, ५५० माथि आवासीय वार्षिक र ४३ संस्थागत मासिक सदस्यहरू रहेका छन्। होम सुविधा सुरु भएको अहिले ११ महिना भएको छ। उपत्यकाका ४५०० देखि ५००० घरहरूसम्म होम सुविधाका सेवाहरू पुगिसकेका छन्। उपत्यकाको घर निर्माण, मरम्मत तथा घर निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्ने ५० देखि ६० वटा कम्पनी र संस्थाहरूसँग मिलेर आफ्ना सेवाहरू दिइरहेका छन्।
होम सुविधाले वार्षिक र मासिक प्याकेजहरूमा अहिले आफ्ना सेवा दिँदै आएको छ। ५००, १०००, २६००, ३०००, ४९९० र ७५०० गरी ६ वटा प्याकेजका सुविधाहरू उपलब्ध छन्। एकचोटी होम सुविधाको सदस्य बनिसकेपछि ग्राहकले घरका अन्य सबै सेवाहरूमा छुट पाउँछन्।आफ्ना ग्राहकले फोन गरेको १ घण्टा भित्र नै होम सुविधाका सिपालु कामदार घरसम्म पुग्ने गरेका छन्। कम्पनीले आफ्ना सदस्यहरूलाई सवारीसाधनको ब्लुबुक नवीकरण सेवा पनि सित्तैमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। घरमा ब्युटिसियन, सलुन, मोटर सर्भिसिङ्ग र सरसफाइ गरिदिने मान्छेहरूको पनि व्यवस्था गरिदिने गरेका छन्। यसरी कम्पनीले अहिलेसम्म विभिन्न पेसामा दक्ष १८ जना व्याक्तिहरुलाई रोजगार बनाइसकेका छन्।
अबको एक वर्षमा ५०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई रोजगार बनाउने उदेश्यले होम सुविधा अघि बढिरहेको छ। गोङ्गबु, कलङ्की, सातदोबाटो र कोटेश्वोरमा पनि आफ्नो शाखा विस्तार गर्ने सोच रहेको मण्डल बताउँछन्।
नेपालमा एकातिर सीप भए पनि रोजगारीको अवसर नपाएर बसेका व्यक्तिहरू धेरै भेटिने गरेका छन् भने अर्कातिर पैसा तिरेरै पनि भने जस्तो सेवा नपाउँदा सेवाग्राहीहरू पनि दिक्क भेटिन्छन्। ‘होम सुविधा’ यी दुवै पक्षले भोग्नु परेको समस्याको एउटै हल बनेर आएको छ। यसरी एकातर्फ आज पवनले देखेको सपना पूरा हुँदै गई रहेको छ भने अर्कातर्फ समाजले भोग्नु परिरहेको समस्याले व्यावसायिक समाधान पाएको छ।
नोट: यो लेख उद्यमी नेपालको श:शुल्क सेवा अन्तर्गत तयार पारिएको हो। उद्यमी नेपालको श:शुल्क सेवा लिइदिनु भएकोमा होम सुविधालाई विशेष धन्यवाद।
होम सुविधासँग सम्पर्क गर्नु परेमा दिइएको नम्बर डायल गर्नुहोस्: ०१-४४६१५११
तलको युट्युब भिडियोमा उद्यमी नेपाल र होम सुविधाबीच भएको प्रतक्ष अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस्: